Abdillahi Yuusuf iyo warriyihii Carbeed! (WQ: Xasan Cabdi Shire) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Abdillahi Yuusuf iyo warriyihii Carbeed! (WQ: Xasan Cabdi Shire)
Abdillahi Yuusuf Ahmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena noqday Madaxweynihii ugu horeeyey ee Pubtland ayaa wariye Carbeed waxaa u waydiiyey Dowlada Carabtu sida ay Soomaalida ula shaqeeyaan ama u taageeraan? Cabdullahi ayaa ku jawaabay; “Waddamada carabtu muddo 25 sanno oo dagaal sokeeye Soomaalidu ku jirtay, gaajo iyo dhibaatona haysatay wax taageero ah kama helin, halka Soomaalidu taageero ka heshay waddamada Reer Galbeedka. Waxa u sii raaciyey “haddaba xagee ayey jireen Carabtu muddadaas? Waxay u qabteen Soomaalida ma jirto”, kaddibna wariyihii ayaa waydiiyey su’aal kale oo ay ka muuqato cadho; ma laga yaabaa inay idiin arkaan inaad Wadamada Reer Galbeedka la socotaan ama u dhowdihiin?
Abdillahi su’aal ayuu dib ugu celiyey oo yiri isagoo wajigiisa ay ka muuqato masuuliyad iyo dhimirsanaan “Carabi xaggay iyadu jirtaa ama la jirtaa? Miyaanay la socon oo la ahayn saaxiib Reer Halbeedaka? Haddaay sidaas tahay maxaynu iskugu eedaynaynaa reer galbeedka? Waxa uu sii raaciyay qofkasta oowax natarayaa waan soo dhawaynaynaa.
Markale ayaa wariyihii Carbeed oo cadhaysani waaydiiyey Madaxweynaha “xitaa Israail miyaa? Isagoo u jeeda miyaad soo dhawaysanaysaan haddii ay taageero iyo xidhiidh idiin muujiyaan. Madaxweyne Cabdillahi waxa uu ku jawaabay; “maya Israil xidhiidh lama lehin, laakiin waa laga yaabaa waddamada carabtu qaarkood inay xidhiidh dhow la yeeshaan Israaiil”
Previous articleSomaliland Standard: British Government signs agreements worth £31m to support development in Somaliland